अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवस - विकिपिडिया
(अमेरिकी स्वतन्त्रता दिवस बाट पठाईएको)
Displays of fireworks, such as these over the Washington Monument, take place across the United States on Independence Day.
(२०११) सोमबार, जुलाई ४
अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवस जुलाई महिनाको ४ तारिखका दिन मनाइन्छ । यो सङ्घीय (सार्वजनिक) बिदाको दिन हो। यसलाई फोर्थ अफ जुलाई भनिन्छ। सन् १७७६ जुलाई ४ मा बेलायतबाट अमेरिका स्वतन्त्र भएका अवसरमा यो दिवस मनाइन्छ। यस अवसरमा पटाका, झिरझिरे बाल्नुका साथै कवाज गरिन्छ। मासु पोलेर खाने, उत्सव गर्ने, मेला गर्ने, वनभोज जाने, संगीत कार्यक्रम आदि गर्ने गरिन्छ।
२ शुरूका १३ राज्य
३ चित्र ग्यालेरी
यो सन्दर्भ करिब अढाई सय वर्ष अघिको हो । अमेरिकामाथि बेलायती कब्जा थियो । बेलायती कानुनको विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण अमेरिकीलाई बेलायती-शासन मनपरेको थिएन। यहि क्रममा सन् १७७४ मा १३ मध्ये १२ उपनिवेशका प्रतिनिधिहरू पेन्सलभानिया राज्यको फिलाडेल्फियामा भेला हुनुभयो। जर्जियाका प्रतिनिधिमात्र अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यी उपनिवेशमा बेलायत विरुद्ध लड्ने तयारी भइरहेको थियो। अनि बेलायत विरुद्ध युद्ध पनि शुरु भयो। सन् १७७५ मा कंग्रेस बस्दा युद्ध चलिरहेको थियो। उक्त कंग्रेसले थोमस जेफरसन र अन्य ज्ञातालाई 'स्वतन्त्रताको घोषणा-पत्र'तयार गर्ने जिम्मेवारी दियो। जेफरसनले घोषणा-पत्र तयार पारेपछि जोन एडम्स्, बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनसहितको समितिलाई मूल्यांकन गर्न दिनुभयो। उक्त समितिले घोषणा-पत्रमा केही संशोधन गरेपछि कंग्रेसमा पढेर सुनाइयो। यी १३ उपनिवेशले स्वतन्त्रताको घोषणा-पत्र सन् १७७६ जुलाई ४ मा ग्रहण गरे ।
शुरूका १३ राज्य[सम्पादन गर्ने]
अमेरिकामा शुरूमा १३ राज्यहरू मात्र थिए। ती - डेलावर, पेन्सलभेनिया, न्यू जर्सी, जर्जिया, कनेक्टिकट, मासाचुसेट्स, मेरिल्याण्ड, साउथ क्यारोलाईना, न्यु ह्याम्सर, भर्जिनिया, न्यु योर्क, नर्थ क्यारोलाईना र रोड आइल्याण्ड हुन् । बेलायतको उपनिवेशबाट अमेरिकालाई स्वतन्त्र बनाउने शुरुका यी १३ राज्य हुन्।
चित्र ग्यालेरी[सम्पादन गर्ने]
In addition toafireworks show, Miami lights one of its tallest buildings with the patriotic red, white and blue color scheme on Independence Day
New York City's fireworks display, shown above over the East Village, is sponsored by Macy's and the largest in the country
मिडिया फाइल बजाउनुहोस्
Patriotic trailer shown in theaters prior to the 4th of July 1940
A traditionally-decorated fourth of July cake.
संयुक्त राज्य अमेरिकाको विषय
तेह्र उपनिवेश · अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्ध · अमेरिकी क्रान्ति · स्वतन्त्रताको घोषणापत्र · अमेरिकी गृहयुद्ध · गेटिसबर्ग सम्बोधन · बेलिङ्घम दङ्गा · अरेगन सन्धि · खाडी युद्ध
संविधान · काङ्ग्रेस · अमेरिकी सदन
सिआइए · राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग
अमेरिकी नौसेना · संयुक्त राज्य सेना · संयुक्त राज्य वायुसेना
डेमोक्रेटिक पार्टी · रिपब्लिकन पार्टी
पर्वत (एपलासियन · आयरन) मैदान (ग्रेट प्लेन ) द्वीप (डायोमिड द्वीप)
सहर · पश्चिमी अमेरिका · उत्तर अमेरिका
नदीहरू (अरकन्सास · कोलोराडो · डेलावेअर · मिसिसिप्पी · हडसन · मिसोरी · क्यान्सास) ताल (मिसिगन ताल)
हलिउड · देशी सङ्गीत · झण्डा
स्वतन्त्रता दिवस · झण्डा दिवस · हलोविन
महामन्दी · न्युयोर्क सेयर बजार · न्याजड्याक
विकिमिडिया कमन्समा अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवस सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अमेरिकाको_स्वतन्त्रता_दिवस&oldid=974035" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १३:१८, २० डिसेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।